एक लाख कमेन्ट फेसबुकबाट सरकारलाइ बुझाउने तयारी, भन्नुस बलत्कारिलाइ फाँसी दिने कि नदिने ? - info4nepal
कृपया यो पोस्टलाइ सक्दो शेयर गरेर हामिलाइ एक लाख कमेन्ट प्राप्त गराउन सहयोग गर्नुहोला।
देशमा बढेको बलात्कार र यौनजन्य घटनाले गर्दा अब नेपालमा पनि बलात्कारिलाइ फाँसी दिने कानुन बन्नु जरुरी छ ।
एक महिनामा मात्र २३ ओटा बलात्कार भएको छ।भोलि तपाइको घरमा नपर्ला भन्न सकिन्न, बलत्कारिलाइ फाँसीको सजाए माग गरौ, सक्दो शेयर गरौ।
भोलि तपाईको घरमा पनि पर्न सक्ला
जब RAPE बिरुद्द कुनै Post गर्छु धेरैले राम्रो/नराम्रो प्रतिक्रिया दिनु हुन्छ।Rape भएर कसैको मृत्यु भयो भने RIP को सयौं Comments हरु आउछ्न तर त्यही Rape विरुद्ध केहि बोलौ केही गरौ भन्दा कस्को उपस्तिथि हुन्छ?
6 महिना देखि 75 बर्ष सम्मको rape भैरहेको छ तर कतिपय महान पुरुषहरु यो भन्नु हुन्छ कपडा लाउनु पर्यो नि लामो रे।
एकै महिना मा २३ बलत्कार भएको छ । अब त रास्ट्रपति ज्यु ले पनि कडा कानुन बनाउन बोल्न पर्ने हैन र? अब त बोल्नुस रास्ट्रपति ज्यु
महिला रास्ट्रपति भएर महिलालाइ येति धेरै बलात्कार हुदा किन बोल्नुहुन्न रास्ट्रपति ज्यु?
देशमा घटेका पछिल्ल बलात्कारका घटबा निन्दनिय छन।
जुन देश मा महिला रास्ट्रपति छन त्यहा दिनहु बलत्कार हुदा पनि किन मौन छिन रास्ट्रपति ?
के महिलाको हक र अधिकारका लागि बोल्नु पाप हो र ???
नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा पनि येति धेरै बलात्कारका घटना दिनहु आउनु भनेको धेरै नै लज्जास्पद कुरा हो । हामी न त भौगोलिक क्षत्रफलमा ठूलो छौ न त जनसन्ख्याको आधारमा ठूलो छौ , तैपनी देशमा येति धेरै बलात्कार हुनु भनेको धेरै नराम्रो कुरा हो ।
हामिले प्राय हरेक हप्ता समाचार र मिडियामा बलात्कार अनि हत्याका घटना सुन्दै आएका छौ। सधै जस्तो येस्ता घटना नसुनेको दिन हुदैन ।
अझ् मुख्य कुरा त, जति हामिले सुन्ने गरेका छौ त्यो त केवल १०% मात्र हो। बाकी ९० प्रतिशत बलात्कारका घटना गुपचुपमै मिलाइन्छन ।
के यो सुन्नु लजास्पत छैन र??
नेपाली काङ्रेसले बलात्कार गर्नेलाइ अब फासिको सजाए हुनुपर्ने माग राखेको छ तर सरकार चलाउने कम्युनिस्ट पार्टी ले भने वास्ता गरेको छैन। आखिर किन?
जुन देशमा महिला रास्ट्रपती छिन तेहि देशमा महिलाको सुरक्षा छैन भने रास्ट्रपति शानमा कुर्सिमा बस्नुको केही औचित्य नै रहेन नि ।
२)Stage program मा नकारात्मक हर्कत गर्न नपाउने माग गरम……
३)Internet मा अस्लिल videos हरुको Band लगाउन माग गरौ…..
नेपालमा कानुन नभएको हैन कानुन छ तर बिक्ने कानुन छ… अनि हामी जनता concert छ रे नि आज yar एस्को(पुजनिय अस्लिल हर्कत देखाउने दिदी) जाउ न हेर्न
कम्तीमा हुन्छ्न 500/600 को जमात तर जाउ न हौ एस्तो भएछ तेस्को लागि माग गरम न्याय दिलाउ भन्दा मुस्किलले 10 जना किन भन्दा जति माइतीघरमा गयेर कराएर उफृयेर नि हुनेवाला केही छैन प्रतिउतरमा आउँछ येहि
अनि त्यो stage performance हेर्दा त सबै आयो होला नि है के भो त ती दिदी त खुसी हुनु भयो नि….
अरुको लागि किन लड्नु यार हैन र??
भोलि के हुन्छ कसैले देखेको हुदैन के थाहा तपाईको घरमा पनि त पर्न सक्छ मलाईनै पनि पर्न सक्छ……
सबै केटाहरु तेस्तो हुदैन र केटी पनि सबै सहि हुन्छ्न भन्न खोजेको हैन तर लडाइँ २ जनाकै विरुद्ध गरौं दोशी चाहे केटा होस या केटी सजाय दिउ
आवाज उठाउ…… आज नगरे कहिले??????????
हेर्नुहोस पछिल्ला समयका केही घटना
यौन प्रस्ताव नमान्दा जंगलमा लागि युवतीको मुखमा विरुवाका पात कोचियो, हात उनकै दोपट्टाले पछाडी बाधियो र बलत्कार गर्दा ‘चौथोले बलात्कार गर्ने बेला उनले प्राण त्यागिन्’
कैलाली । हराएको तीन दिनपछि मृतावस्थामा फेला परेकी युवतीको बलात्कारका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।
असार १२ गते वेपत्ता भएकी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाकी २१ वर्षीया युवतीको असार १५ गते नगरपालिकाको चपरथली सामुदायिक बनमा सडेको अवस्थामा लास फेला परेको थियो ।
पाँचै जना बसेर सामुहिक बलत्कारपछि हत्या गर्ने र शवको ठेगान लगाउने योजना बन्यो र उनीहरु असार १२ गते विहान ९ बजेदेखि नै मायालाई ढुकेर बसे ।
माया आउने वित्तिकै दुई जनाले मुख छोपेर हात पछाडी बाधेर जङगलमा लगे । मायाको मुखमा विरुवाका पात कोचियो, हात उनकै दोपट्टाले पछाडी बाधियो र बलत्कार गर्न सुरु गरियो । मुखमा पात कोचिएकी र हात बाधिएकी मायाले न बोल्न सकिन् न त प्रतिकार नै ।
हत्या गरिएकी युवती गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा तथ्यांक सर्भेक्षणमा करारमा कार्यरत थिइन् । मुखमा कोचिएको बुजोका कारण सास फेर्न नसकेपछि चौथो व्यक्तिले बलात्कार गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्नमध्ये मनोज बोगटी हिजो बिहीबार पक्राउ परेपछि उनले नै घटनाको बेली बिस्तार लगाएका हुन् । युवतीले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल पनि उनकै साथमा फेला परेका कारण घटना पुष्टी गर्न थप सहयोग पुगेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बताइए अनुसार असार ८ गते घटनाका प्रमुख योजनाकार मानिएका गणेश बडुवालले युवतीलाई यौन सम्बन्धका लागि प्रस्ताव राखे । तर युवतीले सिधै इन्कार गरिन् । त्यसैको प्रतिसोधमा गणेशले साथीहरुसँग मिलेर सामूहिक बलात्कार गर्ने योजना बनाए र यो घटना भयो ।
प्रहरी उपरीक्षक घिमिरेले आरोपितलाई बलात्कार, ज्यान मुद्दा र सामूहिक बलात्कार गरी तीन मुद्दा चलाइने जानकारी दिए ।
गोठमै छिरेर रातको १२ बजे : ४ जना मिलेर सामुहिक बलात्कार
महिनाबारी भएर घरदेखि टाढाको छाउगोठमा सुतिरहेकी एक किशोरी सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी छन्। पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीलाई स्थानीय तीन किशोरले सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
छाउगोठमा सुतिरहेकी किशोरीलाई सोमबार राति १२ बजेतिर चेतन गिरी, जनक शर्मा र पदम गिरीले बलात्कार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तीनैजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
किशोरीको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार महिनाबारी भएका दुई किशोरी घरदेखि टाढाको छाउगोठमा सँगै सुतिरहेका थिए। तीमध्ये एकलाई राति १२ बजे छाउगोठबाट बाहिर निकालेर अर्कीमाथि बलात्कार भएको नगेन्द्र उपाध्यायले सुर्खेतबाट आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
‘प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सँगै सुतिरहेका मध्ये एउटा किशोरीलाई भगाएर अर्कीलाई छाउगोठभित्रै सामूहिक बलात्कार गरेको पाइएको छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले भने, ‘बलात्कारमा संलग्न तीनैजनालाई मंगलबार पक्राउ गर्न सफल भएका छौं, थप अनुसन्धान जारी छ।’
बलात्कारमा संलग्न मध्ये पदम १४, चेतन १५ र जनक १८ वर्षका छन्।
पीडितसँगै सुतकी किशोरीले राति १२ बजेतिर आफूलाई छाउगोठबाट निकालिएको बताइन्। ‘तीनजनामध्ये पदम गिरीले मलाई छाउगोठबाट बाहिर निकाल्यो, म डराएर खेतमा गएँ’, प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा ती किशोरीले भनेकी छन्, ‘सँगैकी साथीलाई बलात्कार गरेछन्, बिहानमात्रै थाहा पाएँ।’
प्रहरीका अनुसार घरदेखि टाढाको ठाउँ भएकाले आफन्तले मंगलबार बिहानमात्रै घटनाका बारेमा जानकारी पाएका थिए।
‘आफन्तले घटनाबारे जानकारी दिनेबित्तिकै हामीले टोली खटाएका थियौं’, इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौरका प्रहरी निरीक्षक सुशोभन श्रेष्ठले भने, ‘गाउँमै लुकेर बसेका तीनैजनालाई पक्राउ गर्न सफल भयौं ।’
प्रहरीले बुधबार जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराएर घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सुर्खेतको पश्चिमी क्षेत्रमा महिनाबारी हुँदा घरदेखि टाढाको खरले छाएको सानो छाप्रोमा पाँच दिनसम्म बस्नुपर्छ। झ्यालढोका नहुने भएकाले महिलाका लागि छाउगोठ अत्यन्तै असुरक्षित मानिन्छ।
आफ्नै आमालाइ बलात्कार गर्ने छोरा पक्राउ (हेर्नुहोस)
भोजपुर, ४ असार । भोजपुरमा आफ्नै छोराबाट एक वृद्धा बलात्कृत भएकी छिन् । साल्पासिलिछो गाउँपालिका–४ खाटाम्मास्थित स्थानीय २० वर्षीय छिरिङ तेन्जिङ शेर्पाले ६२ वर्षीया आमालाई जबरजस्ती करणी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
गत असार ३ गते साँझ घरमा बसीरहेकी आमालाई घरमा आएर बलात्कार गरेको आरोपमा शेर्पालाई घरैबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र पञ्जियार थारुले जानकारी दिएका छन् ।
पीडित आमाले आफूलाई छोराले पटक–पटक करणी गरेको भन्दै प्रहरी चौकी दोभानेमा उजुरी दिएपछि आरोपित शेर्पालाई पक्राउ गरिएको प्रनाउ थारुले जानकारी दिए ।
यसअघि पनि आफ्नै आमालाई बारम्बार जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका शेर्पालाई आइतबार नै पक्राउ गरी पीडित आमाले दिएको उजुरीको आधारमा थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुर लगिएको छ ।
आरोपित शेर्पालाई अनुसन्धानपश्चात कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाइने प्रनाउ थारुले बताए ।
नेपाक्सलमा पछिल्लो समय बढेको यौनजन्य अपराध र बलात्कारका घटना निकै आपत्ति जनक छन । येति सानो देश भएर पनि दैनिक जसो बलात्कारका घटना बाहिर आउनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो ।
बलत्कारिहरु अझै पनि खुलेलाम बहिर हिडछन तर बलत्कृत हरु डराएर हिडनपर्ने अबस्ता छ । के येहि हो त प्रजातन्त्र? किन फाँसी दिन सकिँदैन बलत्कारिलाइ? ? येस्ता आफ्नै आमालाइ बलात्कार गर्न खोज्नेलाइ कडा भन्दा कडा कारबाही होस ।
नेपालको कानुनलाइ खेलौना सोच्नेलाइ था होस कि कस्तो कानुन छ भनेर । सबैले यो पोस्ट शेयर गरि सक्दो मानिसमाझ पुर्याउ र बलत्कारिलाइ उचित सजाए दिन दबाव दिउ ।
तपाइको प्रतिकृया तल कमेन्टमा गर्नुहोला
येस अघिको घिनलाग्दो खबर
के हुँदै छ नेपालमा ? ७९ बर्सको बृद्धको सामुहिक बलत्कार , जिब्रो पनि काटी
इलामको रोङ गाउँपालिका-१, शान्तिपुरमा ७९ वर्षीया वृद्धाको सामूहिक बलात्कार भएको छ । उनलाई गएराति ११ बजे अज्ञात व्यक्तिको समूहले बलात्कार गरेको हो ।
बलात्कारपछि वृद्धाको जिब्रो समेत काटिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलामले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बस्नेतका अनुसार अहिले अनुसन्धानका लागि एक जना प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोली शान्तिपुरतर्फ गएको छ ।
पीडित वृद्धालाई उपचारका लागि झापाको बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी हस्पिटलमा ल्याइएको छ । हस्पिटलका डा. अनिल बस्नेतका अनुसार महिलालाई सोमबार राति नै हस्पिटल ल्याएको हो । ‘केही चोटपटकहरु देखिएका छन् ।
सुरुमा इमर्जेन्सी वार्डमा राखेर उपचार भएको थियो’, बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले ओपीडी वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।’
यो बलत्कारिलाइ फासिको सजाये हुनपर्यो। सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताले यो पोस्टलाइ शेयर गरि सक्दो जनमानसमा पुर्याउ र बलत्कार बिरुद्द अवाज उठाउ! सरकारलाइ दबाब दिउ कि बलत्कारिलाइ फाँसी दिने कानुन बना भनेर!
कन्चनपुरमा एक बालिकाको बलत्कार पछि हत्या!!
#कन्चनपुर: कन्चनपुरमा एक बालिकाको बलत्कार पछी बीभत्स हत्या गरीयको छ। भिमदत्त नगरपालिका-१८ निम्बुखेडाकि १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भयको हो। बिहिबार मध्यन्ह १२ बजेतिर साथिकोमा जान हिडेकि पन्त साझसम्म घर नफर्किय पछि परीवारले खोज तलासि गर्न प्रहरीलाई खवर गरेपछी खोजबिन गर्दा उनी मृत अवस्थामा फेला परेकि हुन।
प्रहरीले खोजतलास गर्दा बिहान मात्र घरदेखि १ किलो मिटर टाढा खोला पारीको उखुबारी भित्र हत्या गरेर फालियको अवस्थामा सब भेटियको छ। प्रहरीले सुक्रबार बिहान खोजतलास गर्ने क्रममा एक संकास्पद युवकलाई पक्राउ गरेपछी हत्या गरीयको अवस्थामा सब फेला परेको हो।
नेपाल जस्तो सानो मुलुक भयेर येति धेरै घिनलाग्दो बलात्कार को घटना सुन्दा साच्चै सतिले सरापेकै देश जस्तो लाग्छ। अब यसरी हुदैन ! नेपालमा पनि बलत्कारिलाइ फासिको सजाय हुनपर्यो ।
जस्ले बलत्कार गर्छ तेसलाइ फासिको सजाये दिनपर्ने कानुनको माग गरौ सबै जनताले । “बलत्कारी लाई फाँसी दे सरकार” ! मेरो देशलो इज्जत नालिमा बगिराको छ। अब भयेन । सबैले येसको बिरोध गरौ !
यो पोस्ट सबैमाझ पुराउ र बलत्कार बिरुद्द आवाज उठाउ। सबैले यो पोस्टलाइ शेयर गर्नुहोला।
३३ किलो सुन खै प्रधानमन्त्री ज्यु ? कहाँ गयो गोरे ? के हुँदै छ ? हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भाको हो ?
ranjan June 18, 2018
प्रधानमन्त्रीको ‘बर्थ डे’ खर्च ५० लाख ! त्यो पनि सरकारी ढुकुढीबाट
ranjan September 19, 2018
महत्त्वपूर्ण सुचना, येसरी फसायर बलात्कार अनि मृगौला तस्करी गर्छन काठमाडौंमा ……..
ranjan April 13, 2018
के पि ओलिले लुकायेको नबराज सिलवाल माकुनेको गाडी चढेर संसदभवन सयर गर्छन र पुलिस मौन